Blu-ray codecs: Gịnị bụ codecs na Olee Play Blu-ray Movies o
2. Ọkụ Blu-ray diski
3. Buy Blu-ray fim online
> Resource> DVD> Gịnị na-Blu-ray codecs na Olee Play Blu-ray Movies?
Ultimate DVD na video ngwọta na-ahapụ gị tọghata videos na n'ụlọ DVD ka video ọ bụla format 30X ngwa ngwa karịa tupu; ọkụ vidiyo na DVD. Mụtakwuo >>
Ọkụ ọ bụla video, ọdịyo ma ọ bụ oyiyi usoro DVD na oge. Echekwa ọkacha mmasị gị Hollywood Movies ma ọ bụ ime ka gị onwe masterpiece. Mụtakwuo >>
Blu-ray nwere nnukwu ohere nchekwa, na nke a bụ ebe akụkọ amalite. A otu oyi akwa Blu-ray diski ike na-echekwa data ruo 25GB, na a sọrọ oyi akwa Blu-ray diski ruo 50GB. Ọ fọrọ nke nta na abụọ nke HD DVD Ẹkot, nke bụ ihe dị mkpa mere Blu-ray Disc meriri HD DVD na agha.
N'ihi na video codec, mgbe HD DVD naanị akwado MPEG-2 nke bụ otu ihe na DVD, Blu-ray diski na-akwado MPEG-4 AVC na SMPTE VC-1, e wezụga MPEG-2. N'okpuru ebe a bụ zuru ezu malite izi ndị a Blu-ray codecs. Dị ka soro, ị ga-amụta otú na-egwu na n'ozuzu mgbasa ozi ọkpụkpọ na Blu-ray ọkpụkpọ na-ekiri Blu-ray fim na-enweghị wụnye Blu-ray codecs.
A codec bụ a programmụ kọmputa n'ihi na ngbanwe na nyopụta media ọdịnaya na ma ọ bụ na-enweghị àgwà ọnwụ. Blu-ray diski tumadi na-eji ndị a video codecs maka elu definition data nchekwa:
Nke a bụ a lossy video codec eji na ma HD DVD na mmalite Blu-ray Disc. Ọ bụ ezie na MPEG-2 nwere ike mee ka a elu definition codec, ọ bụghị kachasị maka ala bit udu (ma elu àgwà foto). N'ihi ya, ọtụtụ nkiri nka ugbu a ịgbanwee gaa na ndị ọzọ video codecs maka Blu-ray diski.
Ọ bụ n'ịgba aha H.264 / MPEG-4 Part 10 ma ọ bụ AVC (Advanced Video nzuzo). MPEG-4 AVC bụ kasị n'ọtụtụ ebe na video codecs na Blu-ray discs. Ọ na-akwado 4096x2304 pikselụ na mkpebi na ruo 26,7 Mbps maka bit ọnụego. Nke a bụ kachasị video codec maka Blu-ray, nke na-anapụta elu àgwà foto ọbụna na ala bit karịa MPEG-1 na VCD.
E wezụga eji na Blu-ray discs, MPEG-4 AVC (H.264) codec na-n'ọtụtụ ebe nakweere iji strimụ online videos, dị ka YouTube, Vimeo, na iTunes Store.
VC-1 na-ibido mepụtara dị ka a proprietary video format site Microsoft, na a tọhapụrụ dị ka a iwu SMPTE ọkọlọtọ video usoro na April 3, 2006. SMPTE VC-1 bụ ihe kasị mma ọzọ ka MPEG-4 AVC codec maka Blu-ray diski. Ọ na-akwado ndị interlaced video usoro-enweghị converting ka na-aga n'ihu mbụ. Na N'ezie, VC-1 na-akwado na-aga n'ihu ọdịnaya ngbanwe.
Blu-ray Player maka All Blu-ray codecs
I nwere ike na-egwu Blu-ray na fim ndị dị iche iche Blu-ray egwuregwu na Windows, dị ka Cyberlink si PowerDVD, Corel si WinDVD, na Arcsoft si TotalMediaTheatre. N'ihi na Mac ọrụ, nhọrọ dị nta. Macgo Blu-ray Player bụ kwuru mbụ na mma Blu-ray Player for Mac (n'ezie ma PC na Mac version dị). Ndị a Blu-ray Player ga na-emekarị wụnye ha onwe ha video codecs maka Blu-ray diski mere na ị na-adịghị iji wụnye Blu-ray codec onwe gị. Ma ndị a niile Blu-ray Player-eri gị nza nke ego. Ma ọ dị mkpa, na-agbalị DAPlayer (freeware) ma ọ bụ na-Macgo Blu-ray Player for free ọnwa 3.
Free Blu-ray Software Play na Ọkụ Blu-ray Discs
Freemake Alternative: Download Freemake maka Windows na Mac Alternative